सबै पछि, एक सानो भान्छा समस्या छैन - फर्नीचर - प्रेरणा
सबै भन्दा पछि, एक सानो भान्छा समस्या छैन
मे २,, २०२० फेब्रुअरी १,, २०२१ व्यवस्थापक आधुनिक भान्छा
सबैजनासँग ठूलो भान्छा छैन जुन सबै आवश्यक चीजहरू समात्न सक्दछ र तपाईंसँग अझै थप ठाउँ छ। स-साना भान्से पनि अनौंठो हुन्छन् र हामी तपाईंलाई केही चीजहरू दिनेछौं तपाईंलाई कसरी सबै आवश्यक हुन्छ र कसरी भाँडा भण्डार गर्ने र अझ बढि।
सानो तालिकाको यसको आकर्षण छ
तपाईंको परिवारमा कति सदस्यहरू बस्छन्? तपाइँ कति पटक टेबुलमा बस्नुहुन्छ? आजको विश्वको गतिमा, खाने ब्यबस्थासँग समय छ। क्लासिक तालिकाले तपाईंलाई भान्छाकोठामा सेटअप गर्न सक्छ। यसले आधा ठाउँ लिन्छ र अचानक तपाईं भान्छामा धकेल्दै हुनुहुन्छ। दुईको लागि एक गोल तालिकाको बारेमा सोच्नुहोस्। यो रोमान्टिक तालिका फेसनमा फर्कियो। यो सानो छ, सानो भान्छाको लागि आदर्श हो।
अनावश्यक रूपमा ठाउँ खेर नगर्नुहोस्। साधारण पट्टी भान्छामा प्रशस्त ठाउँ चाहिन्छ। टेलरले बनेको भान्छामा लगानी गर्नुहोस्। यो तपाईको भित्री भागमा ठ्याक्कै फिट हुनेछ, यसले धेरै ठाउँ लिने छैन, तर साथमा त्यहाँ तपाईलाई चाहिने महत्त्वपूर्ण कुरा मात्र हुनेछ।
किन भान्छाको आधुनिकीकरण र यसमा केहि नयाँ ल्याउन छैन? खुला शेल्फहरू धेरै ट्रेंडी हुन्छन्, ती सुन्दर ढंगले तपाईको भान्साकोठा र सम्पूर्ण ठाउँ रेखांकित गर्नेछन्। तपाईंसँग खुला तखतामा सबै हुनु हुँदैन। भाँडा, प्लेटहरू र अन्य चीजहरू लाई लक योग्य शेल्फमा धुने बनाउनुहोस्। यद्यपि तपाईं मसला वा चश्मा पर्दा छाड्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं सेतो रंगको साथ स्कोर
हामी केवल क्लासिक सेतो रंगको बारेमा सोच्दैनौं। बजारमा सेतोको एक विस्तृत श्रृंखला छ। कसरी एक वेनिला, मोती, चमकदार वा म्याट सेतो रंगको बारेमा? तपाईं आफैंले सही छनौट गर्न सक्षम हुनुहुने छैन। ठाउँलाई विशेष बनाउन हामी अन्य र otherहरू प्रयोग गर्ने सल्लाह दिन्छौं। उदाहरण को लागी, यस्तो नौसेना निलो वा तथाकथित नग्न शेडहरू। तिनीहरूले अप्टिकलीले ठाउँ विस्तार गर्दछ र तपाइँको सानो भान्छा अब यति सानो देखिनेछैन।
सानो भान्छा उपकरण